Mba ho tan-dalàna amin’izay… | NewsMada
Mba ho tan-dalàna amin’izay…
Ela ny ela, nametra-pialana ny Praiminisitra. Tsy iadian-kevitra, tsy iverenana intsony… Ao anatin’ny fanovana sy fiovana izao. Aiza ho aiza ary hatraiza? Misy ny lesoka azo akana lesona: misy farany sy fetrany ny tsy fandikan-dalàna, raha miezaka manara-dalàna avokoa ny rehetra. Hitan’ny havany eo izay za-dratsy, te hiavaka, miseho ho zavatra, mihevi-tena ho lehibe tsy mba diso, ambonin’ny lalàna…
Mba tena hirosoana sy tanterahina amin’izay ny hoe fanjakana tan-dalàna? Ny herin’ny lalàna no ampanjakaina, fa tsy lalàn’ny hery… niforetana sy niaretana hatramin’izay. Teo, ohatra, ny amboletra tamin’ny lalàm-pifidianana… nampiady. Tsy inona fa teti-dromotra hanilihana ny kandidà atahorana, hanaovana hosoka sy hala-bato… Nazava fa tsy araka ny lalàmpanorenana, raha ny didim-pitsaran’ny HCC.
Izao no vokany, tsy fandatsana akory, sanatria: hajoro ny governemanta vaovao, irosoana ny fanovana… Mbola mety misy ny tsy maty voalavo an-kibo? Mikaviavia amin’ny tena fanarahan-dalàna tsinona, fa za-dratsin’ny jadona, amboletra, mandidy dia homana… Mila fahamalinana sy fahamarinana àry ny raharaha amin’izao: fifampierana amin’izay tokony hilana izany, fanarahan-dalàna, fangaraharana…
Ny fanovana ho amin’ny tena fanarenam-pirenena sy fampandrosoana tokoa no kendrena, hatao, hiarahana… Ho tapi-dalana eo amin’izay ny mpitady sy mpiady seza ary ny mpijapy masinina? Na hihena ahay ny tampohim-pahefana, manjazakazaka amin’ny raharaham-pirenena ananan-kavana… Raha tsy misy izay tena fiovana sy fanovana, fa ny eo ihany no eo: ho sasatry ny miarina eto isika.
Takina àry ny fampiharan-dalàna amin’ireo mpitondra nametra-pialana, anisan’ny fototra nahatonga izao toe-draharaha izao. Tsy nipoaka amin’izao ny hetsi-bahoaka, fa eo ny alahelo amin’ny raharaha maizimaizina rehetra: mila fanadihadiana, fitsarana, fanasaziana… Mba tena misy sy fakan-tahaka ny fanovana, fa tsy hisy afa-maina amin’ny ratsy vita. Ho sahy hiroso amin’izany ve izay mpitondra eo?